Jereo ireo mpitsidika mijery, mijery, mividy amin'ny fotoana tena izy! | Martech Zone
Alatsinainy, Aogositra 27, 2012 Alahady, Aogositra 26, 2012 Douglas Karr
Ny Analytics dia tsy manome anao ny statistika lalindalina sy ny filaharana fihetsika ilainao hanatsarana ny traikefa fiantsenana an-tserasera. Lexity dia manana fampiharana iray, Lexity Live, izay ahafahanao mandinika ny mpanjifa mizaha, mijery ary mividy amin'ny fotoana tena izy. Lexity Live dia rindrambaiko maimaimpoana izay manohana sehatra ecommerce lehibe indrindra eo amin'ny tsena.
Ity misy fihenan'ny Lexity Live avy amin'ny tranonkalany (aza hadino ny mahita ny Demo mivantana):
Araho maso ny asan'ny mpanjifanao amin'ny fotoana tena izy - Lexity Live dia fitaovana fandalinana fifamoivoizana tranokala maimaimpoana natao ho an'ny ecommerce, miaraka amin'ny fanarahan-dia ataon'ny mpitsidika amin'ny fotoana tena izy. Fitaovana hafa toa ny Google Analytics dia afaka mandany ora maro hanodinana data, tara loatra ianao vao mamaly. Miaraka amin'ny Lexity Live, fampahalalana tena izy momba ny mpitsidika tranokala amin'izao fotoana izao dia ahafahanao mijery ny mpanjifanao mizaha ny tranokalanao sy ny pejy sokajy, mianatra momba ny vokatrao avy amin'ny pejin'ny vokatra, ary mivoaka amin'ny fizahana hividy, raha sendra izany.
Araho ny fivezivezin'ny fivarotana anao - Jereo ny fanatsarana ny fifamoivoizanao rehefa mandeha ny fotoana sy ny ora tampon'ny orinasanao, raha manara-maso ny fiavian'ireo mpanjifanao sy ny zavatra tadiavin'izy ireo ianao. Jereo ny tatitra momba ny mpitsidika tsy manam-paharoa, ny fomba fijerin'ny pejy, ny fironana amin'ny teny fanalahidy, ny tranokala voalohany, ny motera fikarohana ary ny geolocation.
Jereo hoe aiza no andaniam-potoana ny mpanjifanao - Pejy inona avy no jeren'ny mpanjifanao sy maharitra hafiriana? Aiza izy ireo no midina? Fantaro amin'ny alàlan'ny fanarahan-dia ny mpanjifa tsirairay sy ny fahitany ny fitondrantenany amin'ny fotoana marina ao amin'ny fivarotana ecommerce anao. Ny tatitra amin'ny antsipirihany momba ny lalana sy ny pejy ho an'ireo mpitsidika tsy manam-paharoa dia misy ny fotoana ao amin'ny tranokala, hatrany amin'ny faharoa.
Lexity dia manana rindranasa karama hafa azonao ampidirina ao ihany koa, ao anatin'izany ny: fividianana fiantsenana, fampidirana fiantsenana Google, Quick Chat, tatitra momba an'i Pinterest, ary fivarotana indray. Midira ho Lexity Live maimaimpoana anefa!
Tags: lexityvelona lexitymagentoanalytics amin'ny fotoana tena izyamin'ny fotoana katrokaamin'ny fotoana katrokashopifyby MediaWiki
27 Aogositra 2012 amin'ny 2:42 PM
Misaotra ny lahatsoratra, Douglas! Tianay ny namaky momba an'io. Ampahafantaro anay raha manana fanontaniana momba ny Lexity ianao, na ny mpamaky anao!
Mpanorina & Tale Jeneraly
27 Aogositra 2012 amin'ny 3:59 PM
Efa nandefa naoty tamin'ny mpanjifa iray, @ twitter-14135545: disqus hisoratra anarana ary hanomboka hizaha azy.